UMvelisi weNdibano yeBhodi yeSekethe eBalaseleyo – PCBFuture
Yintoni iNdibano yeBhodi yeSekethe eShicileleyo?
INdibano yeBhodi yeSekethe eprintiweyo yinkqubo yokudibanisa amacandelo e-elektroniki ngocingo lwebhodi yesekethe eprintiweyo.I-wiring okanye indlela yokuqhuba ekrolwe kwipleyiti yobhedu elaminated ye-PCB isetyenziswe kwi-non-conductive substrate ukwenza icandelo.Ukuqhoboshela amacandelo e-elektroniki kunye neebhodi zesekethe eziprintiweyo linyathelo lokuqukumbela phambi kokusebenzisa isixhobo sombane esisebenza ngokupheleleyo.
Ishicilelweindibano yebhodi yesiphalukakufuna ukudibanisa ngononophelo, ngakumbi ingqalelo kwiinkcukacha kunye nokuchaneka ngokupheleleyo, okuya kugqiba ukusebenza ngempumelelo kwezixhobo zombane.Okwangoku, umatshini we-elektroniki kunye ne-PCB inokuhlanganiswa nge-surface mount assembly (SMT), ifakwe nge-teknoloji yomngxuma (PTH) kunye ne-electro mechanical assembly.
Kutheni ukhetha inkonzo yethu yendibano yesiphaluka eprintiweyo?
1. I-PCBFuture ineenkqubo zokuthengwa kwempahla esele zivuthiwe nezisebenzayo zibonelelaiqhosha lokujika lendibano yePCBngexabiso eliphantsi, ineqela lobuchwephesha elinoxanduva lokuthengwa kwempahla nolawulo lwamacandelo ePCB yomthengi wethu.
2. Sinika i-Surface Mount (SMT), i-Thru-Hole (THT) kunye ne-hybridi yazo zombini.Sikwabonelela ngokubeka omnye okanye kabini-macala.
3. Sinamandla okuququzelela izinto ezingenayo, ulawulo lwenkqubo, kunye novavanyo oluhle, kwaye sinokukunika iinkonzo ezingcono kakhulu zendibano yePCB ukusuka kwibhetshi encinci ukuya kwimveliso yobuninzi.Ngexesha lenkqubo yofakelo lwePCB, ukuba kukho iziphene ezinxulumene nokuveliswa kwePCB, iinjineli zethu ziya kuxela ingxelo yeDFM.
4. Siya kukuthumelela ixabiso le-BOM nge-imeyile kwiiyure ezingama-24.
5. Ngenkonzo yethu ye-BGA yoxinzelelo lwe-welding, sinokususa ngokukhuselekileyo i-BGA engafanelekanga, i-pressure-weld it, kwaye emva koko uyibuyisele kwi-PCB ngokuchanekileyo.Iyonga iindleko.
6. I-PCBFuture inezixhobo ezahlukeneyo ezivela kwizixhobo ezizenzekelayo zokubeka, iziko elikhulu le-solder wave ukuya kwi-manual ufakelo kunye nezikhululo zokuthengisela.Le misebenzi yahlukeneyo isenza ukuba sihlangabezane neemfuno zebhetshi ukusuka kwiiprototypes ezikhawulezayo zokuthengisa ukuya kuthi ga ngexesha lokuhanjiswa kwemveliso yobuninzi.Iingubo zokwaleka ngokusesikweni zingasetyenziselwa ukuhlangabezana neemfuno zokusingqongileyo.
7. Isicwangciso sethu solawulo lomgangatho sisiseko somsebenzi wethu, kwaye inkqubo yethu ihambelana ne-IPC 610 kunye nemigangatho ye-ISO 9002 ye- through-hole, hybrid and surface mount PCBs.Sineenjineli zexesha elizeleyo zokukunceda kuyilo kunye noyilo, kunye nokubonelela ngecandelo elipheleleyo lokuthengwa kwempahla kunye nesicwangciso solawulo lwempahla.Xa ukhetha inkonzo yethu yendibano ye-PCB, ungaqinisekisa unikezelo olungaguqukiyo kwaye kwangexesha lwamacandelo abalulekileyo ebhodi yesekethe.
Yeyiphi inkonzo esinokunika yona?
2-32L ngokusebenzisa-umngxuma ibhodi & HDI
Ibhodi yefrikhwensi ephezulu
Ibhodi yokuxhathisa ifakwe
Iimveliso zovavanyo lweSemiconductor
Ibhodi yamandla obhedu obunzima
I-2-6L ibhodi yesiseko sesinyithi
2-8L ibhodi flex & ibhodi Rigid-flex
Uvavanyo lwemveliso olugqityiweyo
Iinkonzo zokwakha iibhokisi
Ukufumana amacandelo kunye nendibano epheleleyo yePCB
Sikwabonelela ngeenkonzo ezinxulumene nokulungiswa kwePCB kunye nokusebenza kwakhona kunye novavanyo lwesekethe ye-elektroniki.Izixhobo zethu kunye nenkqubo yokuhlanganisa ihambelana ne-IPC, i-MIL-Spec, i-RoHS 5 kunye nemigangatho emi-6.
Indlela yokufumana ucaphulo olukhawulezayo lwendibano yebhodi yesiphaluka eprintiweyo ngaphambi kokuodola?
Kufuneka uthumele ifayile ye-Gerber, uluhlu lwe-BOM kunye nenkcazo ye-PCB ukuze ufumane ucaphulo olukhawulezayo lwendibano yebhodi yesiphaluka phambi kokuodola.
I-PCBFuture yiProfessional PCBA & PCB umenzi ovela eTshayina.Sibonelela ngokuchaneka okuphezulu kwecala elinye, i-PCB enamacala amabini, i-PCB ye-aluminium ye-LED, i-PCB eguquguqukayo, ukuthengwa kwezintoPCB Manufacturing kunye PCB Assemblyinkonzo.I-PCBFuture yazisa izixhobo eziphambili kunye nokomeleza & nenkqubo yokulawula isandi.Okwangoku, Siphumelele izatifikethi zenkqubo yomgangatho wamazwe ngamazwe njenge-ISO 9001:2008.Sinoluhlu lwezinto eziphathekayo ezipheleleyo kunye nababoneleli behlabathi jikelele.
Ngaphezu kweminyaka eyi-10 njengenkokeli yoshishino, iPCBFuture yenye yezona zinto zinamava abenzi bePCB eTshayina.Siyazingca ngokwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kwaye sibonelela ngendawo yokusebenza ekhuselekileyo nenempumelelo kubasebenzi bethu abangama-200.
I-PCBFuture inamava obuchule kunye neqela lobuchwephesha be-R & D, iintengiso ezincinci kunye namaqela eenkonzo zabathengi, iqela elinamava kunye neqela lokuthenga kunye neqela lokuvavanya indibano, eliqinisekisa umgangatho weemveliso zomgangatho wokupasa, izinga lokuhanjiswa kwexesha leeodolo zabathengi. .
Njengomlingani weenkonzo eziphambili ze-PCB zokuvelisa kunye ne-PCB (PCBA), i-PCBFuture izama ukuba neminyaka engaphezu kwe-10 yamava obunjineli kwiinkonzo zokuvelisa nge-elektroniki (EMS) ukubonelela ngenkxaso kubathengi abaninzi.Sizimisele ukuba yinkokeli kwiinkonzo ezikhethekileyo zonxibelelwano lwesekethe ye-elektroniki.
1. Ngaba uyazidibanisa iibhodi ezenziwe yenye ivenkile yebhodi?
Hayi. Sinemigangatho ekumgangatho ophezulu kwaye siya kuhlanganisa kuphela iibhodi eziyalelwe nge-PCBFuture.Inxalenye yento eyenza ukuba sahluke kukuba siyila kwaye sihlanganisane kumsebenzi omnye oqhubekayo kunye nomgangatho ongaguqukiyo kunye nexesha lokujika elikhawulezayo.
2. Uyabonelela ngendibano yeprototype (ubungakanani obuphantsi)?
Ewe.I-PCBFuture ayinayo iimfuno zobungakanani bomyalelo obuncinci kwaye inokudibanisa nebhodi enye.Ngolwazi oluthe kratya nceda ujonge iphepha lethu lendibano yeprototype.
3. Ngaba ungayenza iNdibano yePCB engaphelelanga?
Ewe singayenza inxenye yendibano yePCB kuzo zombini ii-odolo ezikhithiweyo/ezithunyelweyo okanye kwi-turnkey.
4. Ngaba unazo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo kumacandelo odidi lwe-BGA?
Unyawo lwecandelo kufuneka lwenziwe ngokweengcebiso zomenzi ngamnye zobungakanani bepad kunye nokukhutshwa kwemaski.Zonke izixhobo uhlobo BGA ziyafuneka ukuba zonke vias phantsi icandelo intente kunye soldermask.
5. Wenza ntoni ngamalungu angasetyenziswanga?
Sibuyisela zonke iinxalenye ezingasetyenziswanga kumthengi nokuba kitted / ukuthunyelwa okanye turnkey.
6. Ingaba ixabiso lakho elicatshulweyo libandakanya ntoni?
Siza kukubonelela ngamaxabiso endibano yePCB.Ixabiso lendibano yePCB ibandakanya izixhobo, istensile yesolder kunye nendibano yabasebenzi yokulayisha amacandelo.Iingcaphuno zethu zeqhosha lokujika zikwabonisa amaxabiso ecandelo njengoko kubonisiwe.
7. Ngaba ubonelela i-lead-free PCB Assembly?
8. Yiyiphi imigangatho yakho yomgangatho we-PCB Assembly?
INdibano yakha kwi-IPC-A-610 i-rev yangoku i-Class 2. I-Class 3 kunye ne-J-Std-001 ziyafumaneka ngokuphononongwa kwangaphambili.
9. Ziziphi iimfuno zakho zoluhlu okanye iifomathi ezinephaneli?
IiPCBs kufuneka zibenefomathi eneereyili eziqhekekileyo ze-0.5” ubuncinane kumacala ama-2 alwayo.Ukuba iireyili azikho singakwazi ukwakha iibhodi ezizimeleyo ngaphandle kokuba le migaqo ilandelayo ifezekisiwe: 1-up ubukhulu be-PCB yi-2"x2" (51mmx51mm) okanye ngaphezulu, i-PCB nganye ye-1-up kufuneka ibe ne-fiducials, i-fiducials kufuneka ibe ubuncinane be-0.118 " (3.0 mm) ukusuka kumda we-PCB, akukho nxalenye inokusondela kuno-0.196” (5.0mm) ukusuka kumda wePCB.
10. Kuthekani ukuba ndineengxaki ngeebhodi zam ezilayishiweyo?
Ukuba ufumana naziphi na iingxaki emva kokufumana ibhodi oyilayishile, nceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza.Emva kokumisela ingcambu yengxaki, siya kuvavanya ingxaki kwaye senze ukulungiswa okufanelekileyo / ukulungiswa kwakhona okanye ukulungiswa kwakhona.Ngayo nayiphi na imbuyekezo, siya kukunika inombolo ye-RMA.